अक्षयकुमार किन डराए ? इमेज बचाउन ट्रेलरमा लाइक-डिसलाइकको संख्या लुकाए ! - Birgunj Sanjalअक्षयकुमार किन डराए ? इमेज बचाउन ट्रेलरमा लाइक-डिसलाइकको संख्या लुकाए ! - Birgunj Sanjalअक्षयकुमार किन डराए ? इमेज बचाउन ट्रेलरमा लाइक-डिसलाइकको संख्या लुकाए ! - Birgunj Sanjal
अक्षयकुमार किन डराए ? इमेज बचाउन ट्रेलरमा लाइक-डिसलाइकको संख्या लुकाए !
२४ आश्विन २०७७, शनिबार ०८:०२
बलिवुड अभिनेता अक्षयकुमारको नयाँ फिल्म लक्ष्मी बमको अफिसियल ट्रेलर शुक्रबार रिलिज गरिएको छ |युट्युबमा रिलिज गरिएको ट्रेलरलाई लाइक वा डिसलाइक गरेको संख्या नदेखाउने व्यवस्था गरिएकोमा अक्षयकुमारको आलोचना भएको छ ।
युट्युबमा भिडियोलाई लाइक र डिसलाइक गर्न त मिल्छ तर कुल कति लाइक र डिसलाइकको संख्या भने देखाउदैन । यसअघि आलिया भट्ट र अनन्या पाण्डेको फिल्मको ट्रेलर रिलिज हुदा रेकर्ड डिसलाइक भएको थियो । आलियाको फिल्म सडक-२ को ट्रेलरको डिसलाइक मात्र १३ मिलियन रहेको छ जबकी लाइक ७ लाख ३० मात्र रहेको छ ।
अनन्या पाण्डेको फिल्म खाली पिलीको ट्रेलरलाई एक लाख ६६ हजार डिसलाइक र ५६ हजार लाइक रहेको छ ।फिल्मको ट्रेलरमा लाइक-डिस लाइकको संख्या नदेखाउदा अक्षयकुमार पनि डराएको देखिएको छ । अहिले बलिवुडका सेलिब्रेटीविरुद्धको अभियानबाट बच्न र अक्षयकुमारले आफु विरुद्ध हुनसक्ने डिसलाइकको अभियानलाई रोक्न यस्तो कदम चालेको बताइएको छ ।
लक्ष्मी बम फिल्म भुतको बारेमा बनाइएको छ । कमेडी जनरामा बनाइएको यो फिल्मको ट्रेलर निकै रोचक रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण सिनेमा हल बन्द भएकाले ओटीटी प्लेटफर्म डिज्नी प्लस हटस्टारमा नोभेम्बर ९ मा रिलिज हुने यो फिल्मले दर्शकलाई डर र कमेडीले मनोरंजन गराउने देखिएको छ ।कोरोना महामारीपछि रिलिज हुने यो अहिलेसम्मकै ठुलो फिल्म मानिएको छ ।
फिल्ममा अक्षयका अलावा अभिनेत्री कियारा अडवाणीले अभिनय गरेका छन् । फिल्मलाई राघव लवरेन्सले निर्देशन गरेका चाहन भने फिल्मलाई फक्स स्टार स्टुडियो र अक्षयकुमारको कम्पनि कप अफ गुड फिल्म्स, तुषार इन्टरटेनमेन्ट हाउस र शबिना इन्टरटेनमेन्टले बनाएका हुन् ।
छत्रपति शिवाजीलाई कसले दियो तलवार ?
जाडो बढेसंगै कोभिड–१९ महामारी बढ्ने सक्ने भन्दै पूर्ब तयारी गर्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन
कस्तो निर्दयी संस्कार ! किन गरिन्छ छोरीको योनी छेदन ?
विरगंजको बगहीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
फेसबुकमा ‘बलात्कारी संगठन’ बनाउने अर्का एक पक्राउ
प्रदेश २ प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक प्रमाणीकरण
बाराको बलिरामपुरमा कपडा तस्करसँग झडप हुँदा तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते
नेकपाको जगरनाथपुर गापामा सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न
वीरगंजमा बरामद २३ किलो सुन प्रहरीले राजस्व कार्यालयमा बुझायो